Uganda na -eme ngosi ngosi ngosi nnụnụ nke anọ nke Afrịka - nnukwu ebe nlegharị anya
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Uganda » Uganda na -eme ngosi ngosi ngosi nnụnụ nke anọ nke Afrịka - nnukwu ebe nlegharị anya
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • nzukọ • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa na Uganda
Ngosi ihe ngosi nke nnụnụ Africa
Ilele nnụnụ bụ otu azụmaahịa niche ndị njem na-eto ngwa ngwa n'ofe ụwa niile, na-apụta dị ka mpaghara mpaghara ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke okike ebe mkpali njem njem na-elekwasị anya na ebe nleta iji hụ nnụnụ.
Ndị na -ekiri nnụnụ bụ ụfọdụ n'ime ndị kacha emefu ego na njem na njem nlegharị anya.
Ná nkezi, ha na -emefu ihe karịrị $ 7,000 n'ime ụbọchị iri abụọ na otu, na -eme nnụnụ ka ọ na -ekiri nnukwu uru.
Ikiri nnụnụ abụrụla ihe dị egwu na ogige ntụrụndụ mba Uganda, na -eweta dollar mbata njem ndị dị mkpa.
The Ngosi ihe ngosi nke nnụnụ Africa A na-eme atụmatụ ime na Disemba 10-12, 2021, na Entebbe, Uganda.
Dabere na Herbert Byaruhanga, Onye isi nchịkwa nke Bird Uganda Safaris Ltd .: “Ndị na -ele nnụnụ bụ ụfọdụ n'ime ndị na -emefu ego na njem na njem nlegharị anya na -emefu ihe karịrị $ 7,000 maka ụbọchị 21, na -eme nnụnụ na -ekiri nnukwu azụmahịa na nnukwu ikike ịgbasa njem nlegharị anya Uganda nke dabere na nsuso gorilla. Uganda nwere ihe karịrị ụdị nnụnụ dị 1,083, ụfọdụ gụnyere obodo, mpaghara, Albertine endemics nke ndị na -ekiri nnụnụ mba ofesi chọrọ ịgbakwunye na ndenye nnụnụ nke ndụ ha. ”
Stephen Masaba, onye isi mmepe azụmahịa na Uganda Wildlife Authority, toro mbọ a na -agba ịzụ ọtụtụ ntuziaka nnụnụ ebe ọ bụ na ile nnụnụ abụrụla ihe dị egwu na Ogige ntụrụndụ mba Uganda, na -adọta ego ndị ọzọ.
Ihe ngosi ngosi nnụnụ nke anọ nke Afrịka abụrụla ebe nzukọ maka ụdị nnụnụ na -ekiri n'ime na n'èzí Africa. Enwere mmụba na -arịwanye elu nke ndị ọkachamara n'ịzụ anụ na ụlọ ọrụ njem maka isonye na njem ama ama nke na -eme tupu ngosi ahụ. Ndị sonyere na njem nlegharị anya nnụnụ nke Africa na -esite na mba dị iche iche gụnyere Panama, Taiwan, Australia, USA, UK, Rwanda, Kenya, na Tanzania. Ndị na -ere ahịa gụnyere ụlọ ọrụ njem, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ebe ezumike, ogige, ntuziaka, ndị na -ere akwụkwọ, nka, ụlọ nri, na ndị nrụpụta.
A na -eme atụmatụ ngosi ihe ngosi nnụnụ nke Afrịka ka ọ wulite akara siri ike, nke a na -amata ebe ọ na -adọta ndị ọbịa ụlọ na mba ụwa ma na -akwado nchekwa na uto nke ikiri nnụnụ na Uganda. Mbipụta a ga -adọta ọtụtụ narị ndị na -ekiri nnụnụ, ndị na -ede akwụkwọ njem, ndị na -eme njem nlegharị anya, ndị nwe ebe obibi safari na ndị egwuregwu ndị ọzọ na mpaghara njem nlegharị anya gburugburu ụwa na -elekwasị anya na Africa dị ka ebe kachasị mma maka ikiri nnụnụ. Ihe ngosi a ga -agụnye njem nlegharị anya na izipu ngosi ngosi, ihe ngosi, ebe a na -azụ ahịa, ụlọ ọgwụ nnụnụ, ije nnụnụ, ụlọ ọgwụ foto, ọzụzụ nnụnụ dị elu, na mwepụta akwụkwọ akụkọ nnụnụ, ịkpọ aha ụfọdụ.